China LiB3O5 (LBO) Umvelisi weCrystal kunye noMthengisi | Ukutya
Ulwakhiwo lweCrystal: I-Orthorhombic, iqela le-Space Pna21, iqela leqela le-mm2
Ipharamitha yomgama: a = 8.4473Å, b = 7.3788Å, c = 5.1395Å, Z = 2
Indawo yokunyibilika: Malunga ne-834 ℃
Ubunzima be-Mohs: 6
Ukuxinana: 2.47g / cm3
Ukwandiswa kweThermal Coeficients: αx = 10.8x10-5 / K, αy = -8.8x10-5 / K, αz = 3.4x10-5 / K
I-LBO (Lithium Triborate-LiB3O5) sesona sixhobo sithandwayo sisetyenziswayo sesiBini seHarmonic Generation (SHG) se-1064nm lasers ephezulu yamandla (endaweni ye-KTP) kunye ne-Sum Frequency Generation (SFG) yomthombo we-1064nm laser ukufezekisa ukukhanya kwe-UV kwi-355nm .
I-LBO inqanaba elithelekisekayo kwi-SHG kunye ne-THG ye-Nd: YAG kunye ne-Nd: YLF lasers, zisebenzisa nokuba luhlobo luni okanye uhlobo lwendibano II. Kwi-SHG kubushushu begumbi, uhlobo I isigaba sokudibanisa sinokufikelelwa kwaye sinobuninzi be-SHG coefficient kwiinqununu ze-XY kunye ne-XZ kwi-wide wavelength range ukusuka kuma-551nm ukuya kuma-2600nm. Ukusebenza kwe-SHG yokuguqula ukusebenza okungaphezulu kwe-70% yokuphuma kunye ne-30% ye-cw Nd: i-lasers ze-YAG, kunye nokusebenza ngokuguqula kwe-THG ngaphezulu kwe-60% yokuphuma kwendlu: i-YAG laser iye yaqwalaselwa.
I-LBO yeyona crystal ibalaseleyo ye-NLO yee-OPOs kunye nee-OPAs ezinoluhlu lobungakanani bamaza okulungiswa ngokubanzi kunye namandla aphezulu. Ezi OPO kunye ne-OPA ezimpompoweyo yi-SHG kunye ne-THG yeNd: I-YAG laser kunye ne-XeCl excimer laser kwi-308nm zichaziwe. Iipropathi ezikhethekileyo zohlobo I kunye nohlobo lwesibini lokuthelekiswa kwesigaba kunye ne-NCPM ishiya igumbi elikhulu kuphando kunye nokusetyenziswa kwe-LBO's OPO kunye ne-OPA.
• Uluhlu olubanzi lokungafihlisi ukusuka kwi-160nm ukuya kwi-2600nm;
• Ubungqingili obuphezulu be-homogeneity (δn≈10-6 / cm) kwaye ikhululekile ukubandakanywa;
• Umlinganiso osebenzayo omkhulu we-SHG (malunga namaxesha amathathu e-KDP);
• Umda omkhulu wokonakaliswa;
• I-engile yokwamkelwa ngokubanzi kunye nokuhamba okuncinci;
• Uhlobo lwe-I kunye nohlobo II olungadibaniyo nesigaba esidibeneyo (i-NCPM) kuluhlu olubanzi lwe-wavelength;
• I-Spectral NCPM kufutshane ne-1300nm.
• Ngaphezulu kwe-480mW yokuphuma kwi-395nm yenziwa kukuphindaphindwa kokuphindwe kabini nge-2W yemowudi evaliweyo yeTi: Isapphire laser (<2ps, 82MHz). Uluhlu lobude be-700-900nm lugutyungelwe yi-5x3x8mm3 LBO crystal.
• Ngaphezulu kwe-80W imveliso eluhlaza ifunyanwa yi-SHG ye-Q-switched Nd: YAG laser kuhlobo II 18mm ubude be-LBO crystal.
• Ukuphindaphindwa kokuphindaphindwa kwediode yempompo Nd: I-YLF laser (> 500μJ @ 1047nm, <7ns, 0-10KHz) ifikelela ngaphezulu kwe-40% yokusebenza ngokukuko kwi-9mm ende ye-LBO crystal.
Iziphumo ze-VUV kwi-187.7 nm zifunyenwe ngokwenziwa kwesilinganiselo sokuhamba.
• I-2mJ / i-pulse diffraction-limited beam kwi-355nm ifunyanwa ngokuhamba rhoqo kwe-intracavity kathathu kwi-Q-switched Nd: YAG laser.
• Ukuguqulwa okuphezulu kokusebenza ngokukuko kunye ne-540-1030nm yoluhlu lobungakanani be-longuevel lufunyenwe nge-OPO impontshwe kwi-355nm.
• Chwetheza i-OPA ityhilwe kwi-355nm kunye nokuguqulwa kwamandla okupompoza ukuya kuma-30% kuye kwaxelwa.
Uhlobo lwe-II NCPM OPO olumpontshwe yi-XeCl laser excimer kwi-308nm luphumelele u-16.5% woguqulo, kwaye amanqanaba amade okulungelelaniswa kwamaza afumanekayo ngemithombo yokupompa eyahlukeneyo kunye nokulungiswa kobushushu.
Ngokusebenzisa ubuchule be-NCPM, chwetheza i-OPA empontshwe yi-SHG yeNd: laser ye-YAG e-532nm yaqwalaselwa ukuba igubungele uluhlu olubanzi lokulungisa ukusuka kwi-750nm ukuya kwi-1800nm ​​ngobushushu kwi-106.5 ℃ ukuya kwi-148.5 ℃.
Ngokusebenzisa uhlobo II I-NCPM LBO njenge-optical parametric generator (i-OPG) kwaye uchwetheze I-BBO ehambelana nesigaba njenge-OPA, umda omxinwa (0.15nm) kunye nempompo ukuya kwisiginali yokuguqula amandla (32.7%) zafunyanwa. xa ityhilwe yi-4.8mJ, 30ps laser kwi-354.7nm. Uluhlu lwe-Wavelength tuning ukusuka kwi-482.6nm ukuya kwi-415.9nm yagutyungelwa ngokonyusa ubushushu be-LBO okanye ngokujikeleza kwe-BBO.
I-Orthorhombic, iqela le-Space Pna21, iqela leqela le-mm2
Malunga ne-834 ℃
Ukwandiswa kweThermal Coeficients
Ukusebenza ngokuQhelekileyo kokuSebenzayo
ISigaba se-SHG Uluhlu oluThelekisekayo
Ulungelelwaniso lwe-Therm-optic (/ ℃, λ kwi μm)
<0.1% / cm kwi-1064nm <0.3% / cm kwi-532nm
4.7 ℃ · cm (Uhlobo I, 1064 SHG)
0.60 ° (Uhlobo I 1064 SHG)
Ukunyamezelana kobukhulu (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.5 / -0.1mm) (L≥2.5mm) (W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.1 / -0.1) mm) (L <2.5mm)
Cacisa ukuvula embindini iipesenti ezingama-90 ubukhulu Akukho zindlela zokusasaza ezibonakalayo okanye amaziko xa ehlolwa yi-50mW laser eluhlaza
Ukucaba Ngaphantsi kwe-λ / 8 @ 633nm
Ukuhambisa ubugqwetha bangaphambili Ngaphantsi kwe-λ / 8 @ 633nm
Ukukrola / Ukumba ingcono kune-10/5 ukuya kwi-MIL-PRF-13830B
Ukufana ingcono kunemizuzwana engama-20 ye-arc
Ukufana ≤5 imizuzu ye-arc
Ukunyamezelana kweAngle △ -0.25 °, △0.25 °
Umqobo womonakalo [GW / cm2] > 10 ye-1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (ipolishiwe kuphela)> 1 ye-1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-camera)> 0.5 ye-532nm, TEM00, 10ns, 10HZ (AR-camera)